Ihe Ga-enyere Mmadụ Aka Idi Obi Mgbawa ma Ọ Bụrụ na Ya na Onye Ọ Chọrọ Ịlụ Agbasaa | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
IHE MERE O JI ESI IKE ODIDI
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Amaka * kwuru, sị: “Echere m na ahụla m onye ga-alụ m. Agwara m onwe m na ọ bụ nwoke a ka mụ na ya ga-ebi. Ma mgbe anyị kpara ọnwa abụọ, agwara m ya na achọghịzi m ka e nwee ihe jikọrọ mụ na ya. Onye gwa m na ọ bụ otú a ka anyị ga-esi tisaa, agaghị m ekweta.”
Nwa agbọghọ ọzọ aha ya bụ Ebere kwuru, sị: “Ọtụtụ ihe na-amasị m na-amasịkwa onye mụ na ya na-akpa. M chere na o nweghị ihe ga-eme ka anyị ghara ịlụ. Ma ka oge na-aga, achọpụtara m na ihe anaghị adabara anyị abụọ. Ahụkwara m nsogbu m na-aga ịbanye na ya, mụ agwa ya ka anyị kwụsị ịkpa.”
Ọ bụrụ na ụdị ihe ụmụ agbọghọ abụọ a kwuru emetụla gị, isiokwu a ga-enyere gị aka ka i die ya.
Mmadụ abụọ chọrọ ịlụ gbasaa, ọ na-ewute ha abụọ. E nwere otu nwa agbọghọ ya na onye chọrọ ịlụ ya kpara naanị ọnwa isii tupu ha agbasaa. Aha ya bụ Chinyere. O kwuru, sị: “Ahụ́ gwụrụ m n’ihi na ahụrụ m ya n’anya, achọkwara m ka mụ na ya biri. Ma tupu anyị amara ihe na-emenụ, anyị agbasaala. Ọ na-abụ m nụ egwú na-atọ anyị abụọ ụtọ, mụ echeta otú anyị si enwe aṅụrị mgbe ahụ anyị ka na-akpa. M gaa ebe ụfọdụ anyị abụọ na-adị aga mgbe ahụ, ya ana-ewute m na mụ na ya anọghịzi. Ọ bụ otú a ka ọ dị m mgbe ahụ n’agbanyeghị na ọ bụ m gwara ya ka ọ gawara onwe ya.”
Mgbe ụfọdụ, ọ na-aka mma ka a gbasaa n’agbanyeghị na ọ na-agbawa obi. Ebere kwuru, sị: “Mmadụ nwere ike ịgba nkịtị ka ọ ghara itiwa onye nke ọzọ obi. Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ha abụọ anọgide na-akpa n’agbanyeghị na ihe anaghị adabara ha, obi ga-emecha gbawaa ha abụọ.” Chinyere kwukwara otu ihe ahụ. Ọ sịrị: “Ọ bụrụ na obi anaghị adị gị mma mgbe gị na mmadụ na-akpa, obi agaghịkwa na-adị gị mma ma ọ bụrụ na unu emechaa lụọ. Ọ bụrụ na unu achọpụta ya n’oge ma gawara onwe unu, ọ ga-akara unu mma.”
Ọ bụrụ na gị na onye ị chọrọ ịlụ agbasaa, ọ pụtaghị na ị bụ ajọ mmadụ. Ọ bụghị mgbe niile ka mmadụ abụọ chọrọ ịlụ ibe ha na-emecha lụọ. Ọ bụrụ na obi esighị gị ma ọ bụ onye gị na ya na-akpa ike na ije unu ga-enwe isi, ịgbasa nwere ike ịkara unu mma. Ọ bụrụkwa na unu emechaa gbasaa, echela na ị bụ ajọ mmadụ. I nwere ike idi ya. Gịnị ga-enyere gị aka?
Kweta na ọ gaghị adịrị gị mfe. Ebere kwuru, sị: “Onye mụ na ya kwụsịrị ịkpa abụghị naanị enyi m, ọ bụ ezigbo enyi m.” Ọ bụrụ na mmadụ na onye ọ hụrụ n’anya agbasaa, ọ ga-ewute ya. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Okoro kwuru, sị: “Ọ bụrụ na mmadụ abụọ chọrọ ịlụ agbasaa, ọ ga-ewuterịrị ha n’agbanyeghị na ihe mere ha ji gbasaa bụ ka ihe dị mma.” N’oge Eze Devid nọ ná nsogbu, o dere, sị: ‘N’ogologo abalị dum, m na-eme ka ihe ndina m jupụta n’anya mmiri m.’ (Abụ Ọma 6:6) O nwere ike ịdị anyị otú a ọ dị Eze Devid. Mgbe ụfọdụ, ihe ga-enyere mmadụ aka idi ụdị mgbawa obi ahụ bụ iji nwayọọ na-edi ya. Ihe ga-enyekwaranụ ya aka bụ ịghọta otú obi dị ya.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Abụ Ọma 4:4.
Mete ndị ga-enyere gị aka enyi. Ịkpa ndị ọzọ nso n’ụdị oge a adịghị mfe. Nwa agbọghọ ahụ aha ya bụ Amaka kwuru, sị: “Mgbe mụ na nwoke ahụ chọburu ịlụ m gbasara, ihe m mere bụ ịnọrọ onwe m. M malitere ịnọ naanị m ka m nwee ike inweta onwe m ma chebara ihe niile merenụ echiche, marakwanụ otú mmiri si baa n’opi ụgbọgụrụ.” Ma, Amaka mechara kpawa ndị enyi ya nso. O kwuru, sị: “Otú m si na-akpa ha nso emeela ka obi na-adị m mma. O meekwala ka mgbasa ahụ anyị gbasara ghara ịna-ewute m otú o sibu ewute m.”—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 17:17.
Mụta ihe na ya. I nwere ike ịjụ onwe gị, sị: ‘Ihe a merenụ ọ̀ kụziiri m ebe ụfọdụ m nwere ike ịrụ ọrụ? Ọ bụrụ na o nwere ihe m mụtara, ọ̀ ga-enyere m aka ma mụ na onye ọzọ kpawa?’ Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Nnenna kwuru, sị: “Ka oge na-aga, m bịara nwetatụwa onwe m. Ma, o were m oge tupu mụ enwee ike idi ihe niile merenụ.” Okoro kwetakwara ihe a o kwuru. Ọ sịrị: “O were m otu afọ tupu mụ enweta onwe m mgbe mụ na onye m chọrọ ịlụ gbasara. O wekwara m ogologo oge tupu mụ amụta ihe na ya. Ihe mụ na ije jere n’oge ahụ mere ka m ghọtakwuo ụdị mmadụ m bụ, mụ amụtakwuo ọtụtụ ihe gbasara ụmụ nwaanyị nakwa ihe mmadụ kwesịrị ime ma ya na onye ọ chọrọ ịlụ na-akpa. Obi anaghịzi agbawa m otú o si agbawabu m.”
Kọọrọ Jehova otú obi dị gị. Baịbụl kwuru na Chineke ‘na-agwọ ndị e tiwara obi, na-ekechikwa ọnyá na-egbu ha mgbu.’ (Abụ Ọma 147:3) Jehova anaghị agwa mmadụ onye ọ ga-alụ, e kwesịghịkwa ịta ya ụta ma mmadụ abụọ chọrọ ịlụ mechaa gbasaa. Ma, anyị kwesịrị iburu n’obi na ihe ọ bụla gbasara anyị na-emetụ ya n’obi. Kọọrọ ya ihe ọ bụla na-enye gị nsogbu n’obi.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: 1 Pita 5:7.
“Weenụ iwe . . . Kwuonụ ihe unu chọrọ ikwu n’ime obi unu, n’elu ihe ndina unu.”—Abụ Ọma 4:4.
‘Ezi enyi bụ nwanne a mụrụ maka oge nsogbu.’—Ilu 17:17.
‘Na-atụkwasịnụ Chineke nchegbu unu niile, n’ihi na ihe banyere unu na-emetụ ya n’obi.’—1 Pita 5:7.
MMADỤ NWERE IKE IDI YA
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Nneoma kwuru, sị: “Mgbe mụ na onye chọburu ịlụ m gbasara, ọ dị m ka ọ̀ bụ m kpatara ihe niile, ọ gbagwojukwara m anya. Ịnọ naanị m kpara m aka ọjọọ, ya ana-adịkwa m ka mụ enweghịzi isi ná ndụ. Ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụ agbasaa, ọ naghị adị mfe idi obi mgbawa ya na ya so. Chineke kere nwoke na nwaanyị ka ha hụ ibe ha n’anya nke ga-eme ka ha nwee mmasị ịlụ. Ọ bụrụ na mmadụ abụọ chọrọ ịlụ emechaa gbasaa, otú Chineke si kee anyị ga-eme ka ha nwee ike idi ya. Ọ naghị adị mfe nwoke na nwaanyị ịhụ ibe ha n’anya ruo na nke ha chọrọ ịlụ. Ha mechaa gbasaa, ọ na-ewe oge tupu ha enweta onwe ha. Ma, ha ga-edili ya.”
Ị chọọ ịmatakwu gbasara isiokwu a, gụọ isi nke iri atọ na otu nke akwụkwọ Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Azịza Ndị Na-adị Irè, Nke 1. Ị gaa n’ebe e dere IHE NDỊ ANYỊ NWERE, pịa ebe e dere AKWỤKWỌ NA BROSHỌ.
Otú Anyị Si Emeso Ndị Ọzọ Udo na Obi ụtọ Nwoke na Nwaanyị Ịkpa Alụmdi na Nwunye na Ezinụlọ
Tụlee ajụjụ anọ ga-enyere gị aka ịma ma ì toruola gị na mmadụ ịkpawa.
Ihe ga-enyere gị aka ịza ajụjụ a bụ ileru onwe gị anya nke ọma.